भीडले बाबाको किताबमा आगो झोस्यो । आमा रूँदै भीडको पछि कुदिन् । उनलाई लोग्नेको माया सधैं लाग्थ्यो । तर, त्यो दिन लेखक–लोग्नेको असाध्यै माया लाग्यो ! आमा भन्छिन्,‘सोचें– भीडबाट उहाँलाई म चराले अण्डा जोगाएजस्तो जोगाएर ल्याउँछु । र, मैले ल्याएँ पनि ।’
श्रावण २३, २०७८ शैलिका छेत्री
राजनीतिले देख्ने सपना साहित्यले पनि देख्छ । राजनीतिले देखेको सपना वैध, साहित्यले देखेको सपना अवैध हुन्छ र ? अगमसिंह गिरीहरूले खनेको जातीयताबोधी साहित्य लेखनको घडेरीमा उभिएर नै त राजनीतिले पनि हिँड्ने मेसो पाएको हो ।
पछिल्लो समय छुदेन काविमोको ‘फातसुङ’, लेखनाथ छेत्रीको ‘फुलाङ्गे’ ले ८० को दशकलाई वर्तमानसम्म तानेर राजनीतिको भौंप्वाल देखाउने काम गरेका छन् । प्रश्न उठ्छ, त्यसबेलाका लेखकहरूले नै किन त्यसबेलाको समयलाई लेखेनन् त ? यसको उत्तर खोज्न ८० को दशकमा राजनीतिले उत्पन्न गरेको भयको बाक्लो हुस्सेभित्र छिर्नैपर्छ ।
म सानो छँदा बाबाले दोहोर्‍याइरहने कविताका पंक्ति आज पनि मलाई कण्ठस्थ छ :
एउटा राजा थियो
राजा अत्याचारी थियो
तर, सुन्दर थियो
राजा पनि थियो मूर्ख र घमण्डी
नहुनाले अग्लो उँचाइको
राजाभन्दा सुन्दर भए
आफ्नो प्राण प्यारो...।
भारतले स्वतन्त्रता पाएको कैयौं वर्ष बितेपछि पनि दार्जिलिङको मानचित्रमा विशेष उन्नति देखापरेको छैन । भारतमा गोर्खालाई जुन चिनारीको संकट थियो, त्यो यथावत् छ । बारम्बार सत्ताको प्रपञ्चमा दबिएको छ दार्जिलिङ । दबाइएका छन् दार्जिलिङका प्रत्येक धरोहर । दबिएको छ दार्जिलिङको साहित्य ।
बाबाले कविताबाट हामीलाई त्यही कुरा भनेका होलान् । मलाई लाग्छ, बाबाको कवि मनको आरनमा पिटिएर निस्किएको कविता थियो त्यो । किनभने उनी आन्दोलनले किनारमा ठेलिएका कवि थिए । आन्दोलनले डामेका मानिस थिए । त्यसैले सपनाको गर्भपतनलाई उनले अक्षरमा उनेका थिए ।
क्रान्ति र अवसाद
क्रान्तिले जीवनलाई विशृंखल अवधितर्फ लैजान्छ । क्रान्तिका आयाम गन्न सकिन्न । यसले दिने पीडा अनि भोगाइचाहिँ व्यक्तिको कल्पनाभन्दा पनि गौण हुन्छ ।
अस्तित्ववादको माध्यमबाट मानवीय स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशविरुद्ध साहित्य सृजना हुन थाल्यो । त्यतिबेलै सार्त्रले आफ्ना कृतिद्वारा सामाजिक अनि राजनीतिक संगठन या संस्थालाई आत्मबोधको शत्रु करार गरेका थिए ।
सुकरातले समाजलाई विचारभावी चिन्तनधारसित जोड्ने प्रयास गर्दा उनको ज्यान गयो । उनी रुढीग्रस्त राजनीतिको मारमा परे । सुकरातका शिष्य प्लेटोले उनकै विचारलाई आफ्ना रचनाहरूमा बल्झाए । सुकरातको राजनीतिक अवसानपछि प्लेटोले ‘थियोटिस’, ‘गर्गीयस’ अनि ‘कायडो’ जस्ता कृति लेखे ।
सेन्ट पिटर्सवर्गमा छँदा गोर्कीले पूर्णतः मार्क्सवाद स्विकारेका थिए । तर, आपसी मतभेदमा उनको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी विभाजित भयो । गोर्कीले एकातिरबाट लेनिनको सिद्धान्त र अर्कोतिरबाट बोल्सेभिकका विचारलाई भेटे । गोर्कीले लेनिनको तानाशाहीमाथि कविता र निबन्धसमेत लेखे । त्यसको प्रतिक्रियामा गोर्कीले दुःख पनि पाए । यस अर्थमा राजनीतिले साहित्यमा व्यापक उत्खननको क्रिया गर्दै आएको विषयलाई बुझ्न सकिन्छ ।
कार्ल मार्क्सको संसारलाई हेर्ने स्वतन्त्र दृष्टि थियो । मार्क्सले राजनीतिक, आर्थिक र दर्शनको क्षेत्रमा ल्याएको क्रान्तिको प्रभाव नै थियो, जसको फलस्वरूप साहित्यमा बदलाव आएको थियो ।
त्यस्तै, स्वच्छन्दतावादी आन्दोलनहरूले युरोपबाट प्राचीन रुढीवादी अन्धविश्वासलाई हटाए । नयाँ सिद्धान्तमा हुर्किंदै गरेको समाजलाई नौलो साहित्य लेख्न उस्काए ।
सार्त्र भन्छन्, ‘युद्धले विनाश, विनाशले मृत्यु र मृत्युले परिवर्तन ल्याउँछ ।’ तर, मृत्यु जन्मको समान अर्को तथ्य मात्रै हो । मृत्यु कहिले पनि मानव स्वतन्त्रताको माध्यम बन्न सक्तैन ।
स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो । तर, मानिसको अस्तित्व बारम्बार किन कैयौं सत्ताधारी चक्रव्यूहमा अल्झेर बाउन्ने बन्न पुग्छ ?
क्रान्ति जड हुन्छ, त्यसले उब्जाएको साहित्य ‘चेतना’ हो । तर, पर–स्वतन्त्रतालाई कहिलेसम्म दबाएर राख्न सकिन्छ ? एक दिन त त्यसले विद्रोहको स्वर लिएर उग्र रूपमा समाजमा झांगिनैपर्छ ।
दुर्भाग्य के भयो भने दार्जिलिङमा भएको सन् १९८६ को आन्दोलन सत्ताका निम्ति जनतालाई आत्मदाह गराउने योजित राजनीति मात्रै बन्यो । तानाशाहीको भग्नावशेषमुन्तिर कैयौं साहित्यिक आवाज त्यसै दबेर हराए । तीमध्ये मेरो बाबाको पनि एक आवाज थियो ।
हरेक आन्दोलनले साहित्यलाई चेतना दिन्छ, तर दार्जिलिङमा त्यही चेतनालाई मारियो । ८० को दशक साहित्यका निम्ति ‘डार्क–एज’ बन्यो । आन्दोलनको अन्तरविरोध, त्यसका असर, उपलब्धि साहित्यमा कहीँ–कतै देखिएनन् । तानाशाहको डरले गुजुल्टियो ८० को दशकको साहित्य ।
बाबाको कालको त्यो छाया मेरो पुस्तासम्मै जिउँदो छ । एमएम कलबुर्गी, नरेन्द्र दाभोलकर, गौरी लंकेश, शिवानी भटनागर, इरफान हुसैन, हेमन्त यादव, शान्तनु भौमिक, नवीन निश्चल, इजरायल मुसा, राकेश सिंह अनि कैयौं ‘चेतना’ लाई मौन गराइएको छ ।
क्रान्ति हाम्रो युगको अनुहार हो । तर, यो अनुहार बिमार छ । यही बिमार अनुहार नै आजको नायक पनि हो । तर, जब सत्ताधारी पुरुषलाई सत्ता गुमाउने डरले सताउँछ, त्यसबेला समाजमा क्रान्तिले आतंकको अनुहार बोक्छ । अनि यसको निरन्तर प्रपञ्चमा घायल बन्न पुग्छन् कैयौं जिन्दगी ।
दार्जिलिङको आन्दोलन पनि यस्तै सत्ताधारी पुरुषको सत्ता पाउने मृगतृष्णा मात्रै थियो । यसमा सामाजिक तत्त्व ओझेल बन्यो । यो क्रान्ति नकारात्मक प्रतिफलको ब्लाकहोल बन्दै प्रत्येक नेपाली मनमा अहिले पनि पिरोलिरहने अतीत बनेको छ ।
पुतली निरन्तर प्रकृतिको रंगीबिरंगी ग्राफिक डिजाइनको प्रदर्शनी गर्दै उड्छ । हात काटिएका बाबालाई बिस्तारै कलम समाउन कर लाग्यो । उनको लेखन्ते कलमले, मृत्युपछि मात्रै विराम पायो ।
आन्दोलन र बाबा
भीडमा आवेग हुन्छ, तर सोच्ने बुद्धिचाहिँ हुँदैन । यस्तै भीडले बारम्बार आरोपहरूको कठघरामा जबरजस्ती बाबालाई उभ्याइदियो । त्यसदिन घरको बरन्डामा एउटा भीड हातमा धारिलो हतियार नचाउँदै आक्रोश प्रदर्शन गरिरहेको थियो । सुनेको थिएँ, क्रोधित भीडलाई कठपुतलीको तारले नियन्त्रित गर्छ । हुन सक्छ, यस्तै तारहरूमा अल्झिएको थियो बाबाको भाग्यरेखा, जो भानु पुरस्कारको गरिमामा जोडसित अन्तरतहलाई नै घचघच्याउने गरी चर्किएको थियो । त्यसदिन बाबाको अस्तित्व भीडको खतरनाक हातमा सीमित बनेको थियो । तत्कालै ढुंगा प्रहार गर्दै भीडले घरको दैलोसमेत भत्कायो अनि घरभित्रै तीव्र तमासामा आतंक मच्चाउन सुरु गर्‍यो ।
आन्दोलन चलिरहेका बेला बंगाल सरकारले भानु पुरस्कार घोषणा गर्‍यो । त्यसपल्ट पुरस्कारका हकदार थिए– शरद छेत्री अर्थात् मेरा बाबा । आन्दोलनको दुश्मन त्यही भानु पुरस्कार बन्यो । हिजोसम्म नेपाली साहित्यलाई उचाइमा पुर्‍याउने शरद छेत्रीलाई रातारात जातिको दुश्मन बनाइयो । मानौं, पुरस्कार थाप्नु महान् कलंक हो ।
‘राज्य सरकारले दिएको पुरस्कार थाप्ने जातिविरोधी हुन्,’ भीडले भन्यो । हिजोसम्म छेउमा रहेका लेखक साथीले पनि त्यही भने । राजनीतिले त भन्यो भन्यो, समाजले पनि त्यही भन्यो । तर, जसले त्यसो भन्यो, उसैले राज्य सरकारसित छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको मोलतोल गर्‍यो र थाप्यो दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल । शरद छेत्रीलाई जसले जातिविरोधी भन्यो, उसैले आन्दोलन बेच्यो, जनताको सपना बेच्यो र थाप्यो दार्जिलिङको सत्ता ।
‘राज्य सरकारले दिएको चौकी थाप्ने जातिविरोधी,’ आन्दोलन नाइके सुवास घिसिङलाई यसै भन्नुपर्थ्यो, होइन र ?
त्यतिखेर हाम्रो घरको दैलो फुटाउने भीड मौन थियो । घरका छानामाथि ढुंगामुडा गर्ने भीड मौन थियो । बाबाकै छेउका लेखक साथी मौन थिए । मौन थियो समाज, राजनीति मौन थियो ।
आमा, लेखक लोग्ने र आन्दोलन
आमा भन्नुहुन्छ, ‘जीवनको सबैभन्दा कालो दिन कुनै थियो भने, त्यही दिन थियो ।’ भनिन्छ नि– डरबिना साहस पलाउँदैन । आमालाई यस्तै साहस अचानक आयो रे । ‘सबै बाबातिर झम्टिरहेका थिए, म बीचमा उभिएँ,’ आमा सम्झनुहुन्छ, ‘मैले शरदलाई प्रेम गरेकी थिएँ । मैले भीडबाट एउटै पनि चोट शरदलाई लाग्न दिइनँ ।’
आमालाई लाग्छ, मेरो बाबा इतिहासकै सोझा पात्र हुन् । उनी जुध्न सक्दैनन् । लड्न सक्दैनन् । उनको हतियार जे थियो, साहित्य नै थियो । चारैतिरबाट आक्रोशपूर्ण आवाज थियो– ‘पुरस्कार फर्काइहाल् ! पुरस्कार झट्टै फर्काइहाल् !! फर्काइहाल् !!!’
‘तिम्रो बाबा त्यतिखेर महाभारतका अभागीपात्र कर्णसमान देखिन्थे,’ भन्नुहुन्छ आमा, ‘बाबाको किताब छ नि चक्रव्यूह– हो त्यसमा उनीहरूले आगो झोसे । निमेषभरमै चक्रव्यूह जलेर खरानी बन्यो ।’
बाबाको किताब जल्यो । वरिपरि गालीगलौज उस्तै छ । अचानक भीडले बाबालाई धकेल्दै, तान्दै समाजघरतिर लग्यो । महाभारतका कमजोर पात्र अभिमन्यु चक्रव्यूहको व्यूहरचनामा अलमल्ल परेको स्थिति र बाबाको त्यसबेलाको स्थिति एउटै बन्यो । आमा रुँदैरुँदै भीडको पछिपछि कुदिन् । आमालाई लोग्नेको माया त सधैँ लागिरहन्थ्यो रे, तर त्यो दिन लेखक लोग्नेको असाध्यै माया लाग्यो रे !
‘लाग्यो, म भीडबाट बाबालाई चराले अण्डा जोगाएजस्तो जोगाएर ल्याउँछु,’ भन्नुहुन्छ आमा, ‘अनि मैले ल्याएँ पनि ।’
विवेक दाइ ८ वर्षका अबोध बालक थिए । भीडको पछाडि दौडिने अनुमति उनको कलिलो उमेरलाई थिएन । त्यसैले, कुनै हितैषीले दादालाई घरको सुरक्षित कोठामा बन्द गरिदिए । दाइको कलिलो मस्तिष्कले युद्ध, घातप्रतिघात र मृत्युलाई बुझेको थिएन । उनको निम्ति त्यो जीवनको कालो दिन थियो ।
वारेन जेवोन भन्छन्, ‘म त्यसबेला सुतेको हुन्छु, जब म मृत्युको अँगालोमा हुन्छु ।’ थाहा छ, अर्थहीन जीवन जिउनुभन्दा सार्थक मृत्यु राम्रो हो । तर, यहाँ त मृत्युदण्ड करार गर्ने समुदाय नै अर्थहीन बुझिन्थ्यो । मृत्यु भनेको कहिल्यै नफर्किने सत्य हो । सायद दादालाई अहिलेसम्म थाहा लागिसकेको हुनुपर्छ मृत्यु शब्दको अर्थ । ‘कतिखेर हो निकैपछि मानिसहरू गुनगुन गरेको सुनेँ,’ आमाले आँखाको चेपबाट चियाउनुभयो, ‘बाबा जिउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, रगतले लतपत । बाबाको लेख्ने हात नै काटिएको थियो ।’
हत्केलामा जाती नहुने घाउ
बाबाले भानु पुरस्कार फिर्ता दिए । समय कसैनिमित्त रोकिँदैन रहेछ । समयान्तरमा पहाडको आन्दोलन पनि शान्त बन्यो । जीवनले संघर्षको काँचुली फेरेर शान्तिको पखेटामा बल्लतल्ल उड्न सिक्न थाल्यो । १९८६ मा ‘चक्रव्यूह’ ले पनि साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । हुन त जीवन ग्राफ–पृष्ठमा अंकित उतारचढावको रेखाजस्तो जटिल कुरो हो । जीवन संघर्ष हो । तर, त्यस संघर्षमा बाबा सम्मिलित साहित्यिक संस्था ‘युगपरिबोध’ ले उनको साथ छोड्यो । कैयौं लेखक मित्रका निम्ति लेखक शरद छेत्रीको उपस्थिति अस्वीकार्य विषय थियो । त्यसैले ‘युगपरिबोध’ बाट राजीनामा दिने लेखकका ताँती दिनदिनै बढ्दै गयो । अन्त्यमा ‘युगपरिबोध’ ले बाबालाई चिठीमार्फत संस्था छोड्न आग्रहसमेत गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा लेखकको कलमको मृत्यु हुनु स्वाभाविक थियो । बाबाले पनि साहित्यमा दुई वर्षको बिदा लिए ।
बाबा भन्थे, ‘मेरो हातमा कहिल्यै जाती नहुने चोट लागेको छ ।’ तर, काँचुली फेरेको पुतलीको पखेटालाई, काँचुलीको भग्नावशेषले कहिलेसम्म उड्नबाट वञ्चित राख्न सक्छ ? पुतली निरन्तर प्रकृतिको रंगीबिरंगी ग्राफिक डिजाइनको प्रदर्शनी गर्दै उड्छ नै । बाबालाई पनि कलम समाउन करै लाग्यो । त्यसपछि उनको लेखन्ते कलमले, उनको मृत्युपछि मात्रै विराम पायो । साहित्य र संघर्ष दुई मिल्दो मितेरी मित्रको नाउँ रहेछ । जहाँ संघर्ष छ, त्यहाँ चोट छ, जहाँ चोट छ, त्यसको कुनाकुनाबाट उम्दा साहित्य जन्मेको हुँदोरहेछ ।
लेखक साहित्यकार शरद छेत्रीकी छोरी हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७८ १०:२५
जास्मिन म्यामको एकहप्ते कार्यकाल
तपाईं ‘असफल प्रेमी’ की ‘विद्रोही’ ?